Bonke abantu, kungakhathaliseki ubudala, isimo sezenhlalakahle, imfundo, izithakazelo nemisebenzi, baziphathe ngendlela efanayo uma bengayiqondi ukuziphatha kwabesifazane - banikezela izilaleli: "Logic yabesifazane!". Lona yilo logic abahumusha ngezindlela ezehlukene: ubuwula, ukulinganiselwa, ukungabi nalutho logic, isenzakalo, ukuphazamiseka, isenzakalo paranormal ngisho nezikhali kwengqondo. Ngezizathu ezingaziwa, kuvame ukukholelwa ukuthi amadoda - ukudalwa okucatshangelwayo, okunengqondo, okucacile nokucacile, okunengqondo nokulula - okujwayelekile. Mayelana nezigameko zezinkomba zomlobi zokubhala izingoma kanye nama-anecdotes, kodwa ukungaqondakali ekuziphatheni kwamadoda akekho okubonakala kubonakala. Ukuze ubulungiswa bunqobe, sizokutshela ngezidalwa ezinzima zomuntu. I-Paradox 1: I-Defender
Indoda ngokwemvelo ngumvikeli. Umsebenzi wayo ukuvikela, ukuvikela, kuqala, umndeni wakubo, futhi okwesibili, izwe lakithi kanye nezwe labo. Pho-ke kungani begwema inkonzo empini ngabo bonke amaqiniso nezinkohliso? Ngaphambili, babeziqhenya ngokuthi: "Ngikhonze!", Futhi manje: "Kwangathi uNkulunkulu angasindisa, yiliphi ibutho?".
I-Paradox 2: Mayelana nokukhwabanisa
Uma owesifazane eshintshile umuntu - ukuwa, inhlekelele, ukushaywa indiva. Ukuhlukunyezwa kwabesifazane - okungenakuxolelwa, okungamukeleki, ngokubona kwesigamu esiphezulu sabantu. Uma umuntu eshintshile, lokhu kungenxa yezinkolelo zesayensi kaDarwin ngokwakhe, i-biology yesilisa, esekelwe yizivumelwano zikaSigmund Freud uqobo lwakhe, futhi ngokujwayelekile, kungani kufanele umuntu abambelele kulo, ngoba usakuthanda wena kanye nawe kuphela? Ngenkampani yamadoda ngokwabo - lesi yisikhathi sokuziqhenya.
I-paradox 3: Uyi-macho, futhi u ...
Indoda eye yaba nabesifazane abaningi, ethandwa ngabesilisa obuhlukile, ishintsha abalingani, njengamasokisi - lokhu kuwuphawu. Abangane bakhe bazama ukumlingisa, bafunde ukuhlakanipha nobuciko bokukhohlisa, uyindoda. Kungani owesifazane onokuhlangenwe nakho okucebile kobudlelwane nobulili besilisa, omunye umuntu ongabazi angaqaphele futhi akusiye yedwa owesifazane onamandla alula, i-profurseet nelinye igama elingelona lombhalo wezinhlamvu ezinhlanu?
I-Paradox 4: I-Resolute
Indoda ivame ukuthembela umbono wabangane bakhe, ngezinye izikhathi ngaphandle kokuvunyelwa-imvume yokukwenza okuthile akunakwenzeka. Mhlawumbe, futhi bakhetha omunye nomunye njengomlingani wokuphila e-chorus, umhlangano onjalo wokukhiqiza ebhodini lokugeza noma ingilazi yobhiya ku-bar. Ngemuva kokukhuluma nabangani, indoda ingabuya "nokushintsha okungaqondakali." Ngabe okunye ukuqonda ukuthi ngemuva kokuthi baqoqe ndawonye ndawonye izinhlelo zakho zokuhlanganyela zekhadi lokuphumula, futhi ngempelasonto ezayo awuya endaweni yokudlela yase-Italy, kunalokho - ibha yezemidlalo entsha. Zombili zihlekisa futhi zithukuthele ngesikhathi esifanayo.
I-Paradox 5: Ikhunjulwa
Kubonakala sengathi ubulili obuqinile bunememori ebuthakathaka kakhulu, njengoba ijwayele ukukhohlwa izinsuku ezibalulekile ezidlule kanye nemicimbi ezayo. Kwenzeka ukuthi badideka amaqiniso ngesikhathi, kodwa ngokuzethemba okungaphezu kuka-100% bakubonisa ukuthi kwenzeka nini futhi nini ngempela. Abakhumbuli ukuthi babuyela kanjani ekhaya ekuseni ngemuva kweqembu elibambisene nabo, kodwa bazobeka ngokucacile ukuthi yini oyigqoke lapho uya enkathini yenkukhu. Nokho, i-selective sclerosis.
I-paradox 6: Ucingo
Uma ungeke ufike kumuntu isikhathi eside, qala ukukhathazeka ngokuthi ukhona nokuthi kwenzekani, bese udayela ngokufanayo, bese uzwa lokhu: "Ngangimatasa, izinto ezibalulekile. Futhi akukho okukhathazayo mayelana nalokhu! "Kodwa akudingeki uphendule ucingo, akunandaba ukuthi ukhona endlini yokugezela noma emhlanganweni webhizinisi, uzothi:" Kungani ungayithathi ifoni? Kunomatasa omkhulu kangaka? ". Isiphetho: abesifazane abanayo amacala.
I-Paradox 7: Okubalulekile
Indoda-ukugxeka ngokwemvelo, nokuthi uthanda ukugxeka kanjani abesifazane! Lapha kuphela ukugxekwa, ekuqondeni kwakhe, kuyinto eyodwa: "Ngiyagxeka futhi awukwenzi." Kwangathi ukuphoqeleka nokukhuthazela kungena kumuntu ozama ukugxeka umuntu wakhe.
I-Paradox 8: Iqiniso
Izingane zihle, ziyizimbali zokuphila kanye nekusasa lethu. Ezinganeni, amadoda afana nenqubo yokukhulelwa kwabo ngaphezu kwakho konke.
Uhlu luqhubeka nokuqhubeka, into ebalulekile ukuthi asikwazi ukwenza ngaphandle komunye nomunye. Kubalulekile ukuba ungakwazi ukuthanda isithunzi, kodwa ukungaphumeleli kumuntu, futhi ungazami ukushintsha noma yini - kungubugovu.
Khumbula, ukungazibikezeli kwethu, umehluko nokuhlukile okuwenza izwe libe neningi elihle futhi elithakazelisayo, elikhanyayo nemvelo.
Amaphutha wesifazane ekuhlotsheni nomyeni wakhe
Umuntu wamanje - umvikeli wabuthakathaka
Yini abantu abangayinaki?
Imiphi imikhuba nokuziphatha amadoda abathanda?
Umyeni omuhle, akunjalo?
Njengoba amadoda enza kucace ukuthi intombazane ayidingi
Umsuka ovela emahlathini e-turkey
Izithelo ezimile: omisiwe, ama-apricot omisiwe, umlimi
Ukudla okuhle koNyaka Omusha
Ukudweba abangani nsuku zonke
I-Arrhythmia yenhliziyo, ukwelashwa kwe-arrhythmia
Ubulili phakathi kwendoda eshadile nowesifazane
Indlela yokuhlela isidlo sokuthanda ekhaya ekhaya indoda?
I-version entsha yesibangela sokugula okubulalayo kukaJeanne Friske
Indlela yokunqoba ukucindezeleka
Indlela yokwenza umuthi omuhle waseFrance ngokwakho
I-carrot roll ne-cheese
Izinkanyezi zaseRussia ezinezingane ezihlangothini